बैतडी - बैतडीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका एकजनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
गत वैशाख १५ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका शिवनाथ गाउँपालिका–२ का २२ वर्षीय युवकमा ‘पीसीआर पोजिटिभ’ आएको हो । ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर परिक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए ।
गत चैत ६ गते भारतको दिल्लीबाट आएका ती युवक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रहरी थुनामा रहेका थिए । शिवनाथ गाउँपालिका–४ की १९ वर्षीया किशोरी गीता महरको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका युवामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
उक्त प्रकरणमा उनकी बहिनी पनि हिरासतमा रहेपनि रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको जनाइएको छ । थुनामा रहेका युवकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ‘सिल’ गरिएको छ ।
संक्रमितलाई जिल्ला अस्पतालको ‘आइसोलेसन’मा राखिएको छ । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’को कामसमेत सुरु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेयले जानकारी दिए ।
भारतबाट आएकाहरुलाई सम्बन्धित पालिका लैजाने र सीमा नाकामा प्रहरीहरू अग्रस्थानमा खटिँदै आए पनि सबै प्रहरीसँग अहिलेसम्म गतिलो मास्क समेत छैन। थुनामा रहेका युवकमा कोरोना देखिएको विषयमा स्वास्थ्य कार्यालय, बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले सबै विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मलेनमार्फत सार्वजनिक हुने बताए ।
बैतडी अस्पतालमा ल्याबसहित भेन्टिलेटर राख्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरे पनि बैतडी आएका चिकित्सक समेत २२ दिन बैतडी बसेर काठमाडौँ फर्किएका छन् ।
जिल्ला अस्पताल, बैतडीमा चिकित्सक मात्र होइन, आवश्यक उपकरण र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने किट समेत अभाव हुने गरेको छ ।
दरबारका शक्तिकेन्द्र बदलेका ४ चर्चित हत्याकाण्ड
एकैसाथ धेरै जिल्लाका सिडिओ फेरिए, को कहाँ परे ? (सुचिसहित)
चीन फुटाउने अमेरिकी रणनीति : तिब्बतलाई छुट्टै देश मान्ने विधेयक पेश